‘देशको सीमा मिचिदा मुकदर्शक बन्ने पार्टी कदापि राष्ट्रवादी हुन सक्दैन’ : सीपी गजुरेल – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
‘देशको सीमा मिचिदा मुकदर्शक बन्ने पार्टी कदापि राष्ट्रवादी हुन सक्दैन’ : सीपी गजुरेल
प्रकाशित मिति : २०७४ माघ ८
(स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालमार्फत् क्रान्तिकारी उपयोग गरेको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) अहिले तीन महिने संगठन तथा जनपरिचालन अभियानमा जुटेको छ । निर्वाचनपछि मैदान खाली गरेर सत्ताको खिचातानीमा लडिरहेका संसदवादी पार्टीहरुको भण्डाफोर गर्दै फेरि पनि क्रान्तिकारी माओवादी सम्पूर्णरुपले जनतामा गएको छ । संसदीय व्यवस्थामा विरुद्ध नेपालमा फेरि पनि नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारीको उद्घोष गरिरहेको यो पार्टीले नयाँ जनवादी क्रान्तिका पक्षधर विभिन्न कम्युनिष्ट घटकसँग एकताको लागि सार्वजनिक आव्हान पनि गरेको छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरु विकराल बनिरहेको वर्तमान अवस्थामा यिनै उल्लेखित विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का स्थायी समिति सदस्य तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष सीपी गजुरेलसँग गरिएको टेलिफोन संवादलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।¬ –स.)
निर्वाचनको क्रान्तिकरी उपयोगको कार्यनीतिपछि अहिले देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा के गर्दैछ ?
–निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोगले अपेक्षा गरेजति नभएपनि जनाधार खडा गरेको, संगठन विस्तारका निम्ति आधार तयार भएको, प्रतिक्रियावादी तथा पश्चगामी तत्वहरुको भण्डाफोर गर्न सफल भएको पृष्ठभूमिलाई ख्याल गर्दै माउ पार्टी नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले संगठन विस्तार र सदृढीकरणसम्बन्धी तीन महिने अभियान सञ्चालन गरेको छ । अहिले देजमोले पार्टीको त्यही अभियानमा सक्रिय रुपले भाग लिइरहेको छ । संगठन विस्तार गर्नु र जनाधार खडा गर्नुलाई मोर्चाले अहिलेको प्रमुख कार्यभार ठानेको छ ।
निर्वाचन उपयोगको क्रममा र निर्वाचनपछि पनि संगठन विस्तारको योजना लिएर जनताको बीचमा जानु भएको छ । कस्तो प्रतिक्रिया वा सुझाव पाउनु भएको छ ?
–महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । निर्वाचनअघि पनि हामी जनताका बीचमा गएका थियौं र हामीले हाम्रा कुरा राखेका थियौं । जनताले नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को वैचारिक, राजनीतिक लाइन ठिक छ, यसको नेतृत्व ठीक छ, भोट पनि तपाईहरुलाई नै दिनुपर्ने हो तर के गर्ने तपाईहरु जित्नु पनि हुन्न, सरकार पनि बनाउनु हुन्न, सरकार नबनाएपछि हामीले के पाउँछौं भनेर प्रश्न तेस्र्याउँथे । वास्तवमा हामीले अपेक्षा गरेजति हामीलाई भोट आएन । अहिले हामीले जनताबीचमा गएर भन्ने गरेका छौं– तपाईहरुले भोट वाम गठबन्धनलाई हाल्नुभयो । वाम गठबन्धनले के ग¥यो त ? शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको नारा दिएका थिए । तर अहिले ठाउँ ठाउँमै अशान्ति मच्चिएको छ । स्थानीय निकायमा पनि भ्रष्टाचारले टाउको उठाउन थालिसकेको छ भन्दा जनताले वाम गठबन्धनलाई भोट दिएर गल्ती गरिएछ कि भनेर भन्न थालेको पाइयो । हामीलाई मतदान गर्ने मतदाताहरु त हामीप्रति प्रतिबद्ध नै हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई हामी विभिन्न संगठनमा संगठित गर्छौं । हामीलाई भोट नहाल्ने इमान्दार जनपंक्ति पनि विस्तारै वाम गठबन्धनको भ्रमबाट मुक्त हुँदैछ । कथित वाम गठबन्धन जनतामा एक्पोज हुन अब धेरैदिन कुर्नु पर्दैन । सरकार छिटो गठन भइदिएको भए यिनीहरु पनि कांग्रेसजस्तै भइसक्ने थिए । ढिलै भएपनि उनीहरुको पर्दाफास हुनेछ र जनताले वास्तविक कम्युनिष्ट, क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी शक्तिको पहिचान गर्नेछन् र क्रान्तिकारी माओवादी वरिपरि गोलबद्ध हुनेछन् ।
तीन महिने संगठन तथा जनपरिचालन अभियानको तयारी चाहिं कसरी गरिरहनु भएको छ ?
–अहिले हामी अभियानको अन्तिम तयारीमा जुटेका छौं । पौषको अन्त्यसम्ममा प्रदेशका बैठक प्रशिक्षणहरु सम्पन्न गरियो । माघको पहिलो हप्तासम्ममा संयुक्त मोर्चा, जनवर्गीय संगठनका बैठक प्रशिक्षणहरु, पार्टी जिल्ला कमिटि र एरिया कमिटिका बैठकहरु बसिसक्ने योजना अनुसार अहिले बैठकहरु चलिरहेका छन् । विस्तारै हामी जनताको ग्राउण्डलेवलसम्म जाँदैछौं । अभियानको तयारी गरिरहँदा साथीहरुमा धेरै ठूलो उत्साह पैदा भएको छ । नेतृत्वलाई जनताबीचमा देख्दा जनतापनि आशावादी बनेका छन् ।
एमाले र माकेले पार्टी एकताको हल्ला चलाइरहँदा अहिले जनतामा कस्तो प्रभाव परेको पाउनु भयो ?
–नेपालमा धेरै जनता कम्युनिष्ट तथा वाम समर्थक छन् । जनता सजिलै आफ्ना समस्या हल होस् भन्ने चाहन्छन् । जनताले वाम गठबन्धनलाई राष्ट्रिय स्वाधीनता, देश विकासलाई उच्चस्तरमा पु¥याइदिन्छौं, र सबै सुविधा घर घरमा पु¥याइदिन्छौं भनेर आश्वासन बाँडेका आधारमा भोट दिएका हुन् । अहिले जनताले उनीहरुले भने जसरी नै त्यति सजिलै यी सब कुरा नहुनेरहेछ भनेर बुझ्न थालेका छन् । हामीले त त्यतिवेलै भनेका थियौ । यो सब उनीहरुको झुठको खेती हो । केही पनि गर्दैनन् र हुँदा पनि हुँदैन । यिनीहरुले प्रदेशको राजधानी त सहमतिबाट कायम गर्न सकेका छैनन् । आशंकासहित जनता अहिले पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् ।
जनतामा अनावश्यक कर लगाउने, डोजर व्यवसाय चलाउने, आफ्ना सेवासुविधा बढाउने लगायतका कामहरु स्थानीय प्रतिनिधिहरुले गर्दैगर्दा जनताले वडातहसम्मै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको अभाव महसुस गरेको पाइन्छ । त्यो ठाउँ क्रान्तिकारी माओवादीले लिन सक्छ ?
जनप्रतिनिधिहरुले अहिले धेरै बजेट पाउन बाँकी रहेकाले उनीहरुका जनविरोधी क्रियाकलाप कम मात्रै बाहिरिएका छन् । भ्रष्टचार, कमिसन, उनीहरुका विभिन्न व्यवसायको पर्दाफास अझ घनिभूत रुपमा गर्न जरुरी छ र त्यो हुँदै पनि जानेछ । जनप्रतिनिधिहरु कस्ता छन् भन्ने कुरा त कामनपाका मेयरले पहिलो बैठकबाट नै जनप्रतिनिधिहरुलाई स्मार्ट फोन बाँढ्ने भनेर गरेको निर्णयबाट नै बुझ्न सकिन्छ । अवश्य नै हो कि यतिखेर जनताले बैकिल्पक राजनीतिक शक्तिको खाँचो महसुस गरिरहेका छन् । त्यो पनि वडातसम्मै । त्यो बैकल्पिक शक्ति भनेको नै क्रान्तिकारी माओवादी तथा देजमो हो । हामी जनताको घरघरमा पुग्ने अभियानमा छौं ।
सीमामा एक इन्च जमिन मिचिदा सडकमै उत्रेर आन्दोलित हुने नेपाली जनता यसपटक सीमामा भारतीय विस्तारवादले दिनदहाडै सिमा मिच्दै गर्दा जनता त प्रदेश राजधानीको लागि चाहिं सडकमा उत्रिएको देखियो । राष्ट्रवादी भन्ने एमाले र माके त चुँसम्म पनि बोलेनन् । यी घटनाक्रमलाई कसरी लिनुभएको छ ?
– पहिले सिमानामा स्तम्भ उखेलिंदा, सिमा मिचिदा जनतामा जनु प्रतिक्रिया आउँथ्यो, त्यो अहिले कम भएर गएको हो कि भन्ने देखिन्छ । बारम्बार भारतीय विस्तारवादबाट सिमा स्तम्भ गायब पार्ने, सीमा मिच्ने काम गरेकोले पनि होला आजकल जनताले यसलाई स्वभाविक रुपमा लिन थाले जस्तो छ । नयाँ स्तम्भ गाड्ने नाममा स्थानीय जनतासँग रायसुझाव नलिई र जनतालाई जानकारी नै नगराई नेपाली भूमि मिचेर योजनाबद्ध रुपमा नै नयाँ स्तम्भ गाडिन थालेको हो । यसमा नेपालका राष्ट्रघाती तत्वहरुको पनि मिलेमतो छ । हालै विरगञ्ज नजिकको छपकैयामा पचास विगहा भन्दा जमिन भारततिर पर्ने गरी सिमा स्तम्भ गाडियो । राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि यो गम्भीर खतरा हो । यो सामान्य घटना होइन । हाम्रो पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीले घटना सार्वजनिक हुने वित्तिकै वक्तव्य निकालेर यसको घोर भत्र्सना गरिसकेको छ । आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने एमाले र माकेले त एउटा वक्तव्य समेत निकाल्न आवश्यक ठानेनन् । भारतीय दलाल पार्टीहरुको प्रभावमा परेर जनता पनि सीमा यसरी मिचिदा चिन्तित नदेखिनु निकै गम्भीर कुरा हो । यसले मुलुकलाई सिक्किमीकरण गर्न ठूलो मलजल पु¥याइरहेको छ । राष्ट्रको सिमा मिचिरहँदा जनताको ध्यान भने प्रदेशको राजधानीमा केन्द्रीत भइरहेको छ । यो राम्रो संकेत होइन ।
देशको सीमा मिचिदा मुकदर्शक बन्ने पार्टीलाई जनताले अब चाहिं राष्ट्रवादी नभन्लान् कि ?
–हो उनीहरुको राष्ट्रवादी मुकुण्डो उदाङ्गिने क्रममा छ । जनताले शंकाको नजरले हेरिरहेका छन् । देशको सिमा मिचिदा मुकदर्शक बन्ने पार्टी कदापि राष्ट्रवादी हुन सक्दैन । एमाले र माकेबीचको गठबन्धन र एकताको रहस्य पनि खुल्न बाँकी छ । रातारात यो कुन शक्तिले यिनीहरुलाई एक ठाउँमा उभ्याउन खेल खेल्यो भन्ने कुरा विस्तारै खुल्दै जान थालेको छ । ओलीको कथित राष्ट्रवादलाई भारतीय विस्तारवादले नै प्रयोग गर्न खोजेको पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ । ओली यसअघि पनि भारतीय लवीको नेता भनेर नै मानिन्थ्यो । प्रचण्डमार्फत् ओलीको राष्ट्रवादलाई भारतले प्रयोग गर्ने योजनान्तर्गत रातारात यो गठबन्धन तयार पारिएको चर्चा बाक्लिएको छ । भारतले सीमा मिच्दा उनीहरु केही पनि नबोल्नुले यो विश्लेषणलाई सही सावित गराएको छ । र, यो वाम गठबन्धन पनि भारतपरस्त गठबन्धन नै हो भन्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । जनताले पनि विस्तारै बmुझ्दै जानेछन् ।
संसवादी कम्युनिष्टहरु अर्थात् संशोधनवादी र अवसरवादीहरु एकताबद्ध हुँदै गर्दा सच्चा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुलाई पनि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न परिस्थितिको दबाब पनि छ र त्यस दिशामा क्रान्तिकारी माओवादीले पहल पनि अगाडि बढाएको देखिन्छ ? एकताको कोर्स कसरी अगाडि बढ्छ ? र त्यसको सम्भावना के कस्तो छ ?
–एमाले माकेले ठूलो भ्रम के सिर्जना गरेका थिए भने नेपालका कम्युनिष्टहरु जति सबै मिलिसके, अब कम्युनिष्टहरु बाहिर बाँकी नै छैेनन्,, संचारमाध्यमलाई आफ्नो पक्षमा पारेर त्यसको फाइदा उठाउँदै गलत प्रचारहरु गरेका थिए । अहिलेसम्म आइपुग्दा र खासगरी क्रान्तिकारी माओवादीको हालै सम्पन्न स्थायी समितिको बैठकको वक्तव्य सार्वजनिक भएपछि, नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा भएको छैन, नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा गर्नुपर्छ भन्ने सच्चा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरु एकताबद्ध हुनुपर्छ, पार्टी एकताको लागि छलफल सुरु गर्नुपर्छ, कार्यगत एकताको थालनी गरिहाल्नु पर्छ भनेर सार्वजनिक आव्हान भएपछि त्यसले जनतामा नयाँ आशा पलाएको छ । र, एमाले र माकेले छरेको भ्रम पनि विस्तारै चिरिदै गएको छ र वास्तविक क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट शक्ति त यो पो हो त भन्ने जनतामा पर्दै गएको छ ।
नेकपा (मसाल), नेकपा (विप्लव), नेकपा (ऋषि कट्टेल)का नेतृत्व तहमा पार्टी एकता र कार्यगत एकताका विषयमा छलफलहरु भइरहेका छन् । पार्टी एकताका ठोस आधार तयार पार्ने दिशामा गृहकार्य सुरु भएको छ । सैद्धान्तिक, वैचारिक र राजनीतिक लाइनमा आधारभूत रुपमा सहमति नजिक पुगेपछि अन्य कुराहरु मिलाउन वार्ता टोली बनाएर प्रक्रियामा प्रवेश गर्छौं ।
राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका क्षेत्रमा समस्याहरु विकराल अवस्थामा छन् । ति समस्याहरुलाई केन्द्रमा राखेर आन्दोलनको उठान गर्ने स्थिति चाहिं कस्तो छ ?
–भारतीय विस्तारवादले सीमामा अतिक्रमण गरिरहेको छ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि हप्तैपिच्छे बढिरहेको छ, हामीले वक्तव्य निकालेर मात्रै विरोध गरिरहेका छौं । वक्तव्यमा सीमित विरोधलाई उनीहरुले टेर्ने कुरै भएन । अहिले नै सडक आन्दोलन उठान गर्ने क्रान्तिकारीहरुको आत्मगत अवस्था पनि तयार नभइसकेको अवस्था छ । सडक आन्दोलनको विकल्प नदेखेको हुनाले नै हामीले आफ्नो आत्मगत अवस्था सुदृढ तुल्याउन संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरणको अभियानमा जुटेका हौं । आन्दोलनको परिस्थिति विस्तारै परिपक्व बन्दै गइरहेको छ । अब सडक संघर्ष वा आन्दोलनको विकल्प छैन ।